မှန်ဂျီးနဂါး၊ ခေါင်းလောင်းကြီးနှင့် အကျွန်ုပ်ကြောင်ကြီး Tri | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » မှန်ဂျီးနဂါး၊ ခေါင်းလောင်းကြီးနှင့် အကျွန်ုပ်ကြောင်ကြီး Tri
မှန်ဂျီးနဂါး၊ ခေါင်းလောင်းကြီးနှင့် အကျွန်ုပ်ကြောင်ကြီး Tri
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 25, 2016 in Aha! Jokes, Satire |9comments
ဝမ်စွေ့ ဝမ်စွေ့ ဝမ်စွေ့စွေ့.. မှန်ဂျီးသခင်မ ဝမ်စွေ့စွေ့။ ကြုံမေးနဂါးပြည် မူးမှက်ညီလာခံ၌ နဂါးဘုရင်မအား အရိုအသေပေးသံဖြစ်၏။ အမတ်ကြောင်ကြီးကား အမြီးပင်လှုပ်ဝံ့၊ ကြမ်းပြင်တွင် ပျားပျားဝပ်လျက်…အချိန်က ခွစ်လေး၏သကရာဇ် ၅၀၀၁။။။။ ဗုဒ်ဓသာသနာကား ကွယ်လေပြီ.. လူ့ပြည်တွင် မာမွပ်သခင်ကြီး အရာတိုလာ လျှာပွတ်ခိုမ် လာဘ်ခမောင်းခတ်ချိန်တည်း…..။
မှန်ဂျီးနဂါးဘုရင်မ ခြေဒေါ်ရင်း ပျားပျားဝပ် ခစားလျှပ်
ကြုံမေးနဂါးပြည်မှာ လွန်ခဲ့သောနှစ် ၂၅၀၀ ခန့်က မြန်တြံ့နိုင်ငံဒေါ် ကခြင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံဒေသဟု ခေါ်တွင်သော မေခ၊ မလိခ မြစ်နှစ်သွယ် ဆုံရာ လွန်စွာလှပသည့် ကေအိုင်အေဗိုလ်ချုပ် ခြစ်လုမ ကြီးစိုးခဲ့ရာ မနောမြေဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ယခုနဂါးဗျင်မ မှန်ဂျီးမှာ မဟုတ်တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ၏ တာဝန်ပေးမှုဖြင့် မြန်တြံ့ပြည်အား အနိုင်ကျင့်ကာ မြစ်ဆုံရေကာတာဆောက်ပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံတည်ပြီး သူ့တရုတ်ပြည်ကြီး မီးထိန်ထိန်လင်းအောင် စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်သွားသူဖြစ်သည်။ အတီးအတ မြန်တြံနိုင်ငံသားများခမြာ အဖိုးတန် သဘာဝတွင်းထွက် သယံဇာတမှန်သမျှ တရုတ်ပြည်ကိုပေး၊ မကောင်းမကန်း အစုတ်ပလုတ် ဂျိုကျိုးနားရွက်ပဲ့ မပေါချောင်ညံ့များ ပြန်ရကာ ကံဆိုးသူနောက် မိုးလိုက်လို့ရွာ ဖြစ်ရလေသည်။ ထိုအခြင်းအလျှာကို လာဘ်မခံနိုင်သူ မြန်တြံမျိုးခြစ် ကြောင်ကြီးဦးဆောင်ရွေ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခွဲတမ်း ပိုမိုရပိုင်ခွင့် တောင်းဆိုသည်တွင် မစားရသည့်အမဲ သဲနဲ့ပက် တရုတ်သူလျှို ကြေးမုံဂျီးမှ မြစ်ဆုံရေကာတာအား ဖေါက်ခွဲချလိုက်သည်မို့ ထိုဒေသတခုလုံး ရေအောက် ရောက်ခဲ့ရလေသည်။
ဆာဖတ်သူများ နားရှုပ်ကုန်ပြီထင်၏.. မှန်ပေသည် အီဇာတ်လမ်းတွင် ပါဝင်ကပြ အသုံးတော်ခံမည့် သူများမှာ မွပ်ဂဇက်ရွာသူားဟောင်းများ ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့သေလွန်သော် တဏှာ၏ စွဲလန်းစိတ်ကြောင့် သံသရာတပတ်လည် ပြန်လည်စုံဆည်းကြခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ သို့သော်ကိလေသာတရား ဖုံးလွမ်းမှုကြောင့် အတိတ်ကို မသိနိုင်ကြ.. မောဟ၏ သားဂေါင်များပေတည်း။။ သိလျင် မှန်ဂျီးနဂါးမထံ ခစားနေသူ ကြောင်အမတ်ကြီးဘဝ မတွေးဝံ့ချေ.. ကြောင်ဘာဘီကျူး ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ နဂါးတို့မျက်စောင်း ကာလသုံးပါ မရွေး မဟုတ်ပါလား။။။
ဟဲ့ ငကြောင်ကြီး… မှန်လှပါဖျား ဘုန်းတော်ကြောင့် မှန်ဂျီးသခင်မခြေတော်ရင်း ခစားဝပ်တွားလျက်ရှိကြောင်းပါ။။ အိမ်း… မှန်ဂျီးနဂါး လွန်စွာသဘောကျသွားသည်။ တိုင်းရေးပြည်လျှာ လျှောက်တင်စမ်းကွဲ့..။ မှန်ပါ ဘုန်းတော်ကြောင့် အားလုံးကောင်းပါသည်ဖျား။။။ မှန်ဂျီးနဂါး သဘောတော်ခွေ့သွားသည်မှာ ပြောစရာမရှိတော့… ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်နှင့် ဟဲ့ငကြောင်ကြီး နင်သိပ်လိမ်မာ အရိပ်အကဲသိတယ်၊ ငါ့ကျွန်ထဲမှာ နင်အတော်ဆုံးပဲ။ အမှန်တော့ ကြောင်ကြီးသောက်ကျင့် မသိသောကြောင့် ဖြစ်သည်၊ မှန်ဂျီးသခင်မအား ကြောင်ကြီး ဆိတ်နှင့်ပျစ်မှားနေသည်မှာ ကြာခဲ့ပီ.. တီးလိုက်ရ ဖဲ့လိုက်ရ နွှာလိုက်ရ ရှလွတ်လိုက်ရ…..။ ဒုံး.. ဂျိမ်း ဒိုင်း….. ဟဲ့ သောက်တုပ်ပလုပ် ဘာသံတုံး…. နဂါးပြည်တနေရာ အထက်ဆီမှ ပြင်းထန်ဆူညံလှသော အသံ။ မှန်လှပါ ကြောင်တော်မျိုးတို့ နဂါးပြည်ရှိ ခေါင်းလောင်းကြီးအား ရှာဖွေတူးဖေါ်နေသည့် အသံများပါဖျား…။ သယ်.. ဆရာဝံရိုင်းလိုက်လေ…။ အဘယ်သို့သောသူသည် လာဘ်ရဲဇက်ရဲ ငါသခင်မ၏ ခေါင်းလောင်းတော်ကို လုဝံ့သနည်၊ မကြံစည် မအပ်ရာ မဟုတ်၏လော။ မှန်ပါ.. ယခု တူးနေသူသည် လူသေ မြေသြဇာဖြစ် ရှေ့ဘွ နောက်ဘွ အယုံကြည်မရှိသူ အက်ဂမဟာဒိတ်ဋ္ဌိ ကိုဘေးနွားကင်သူဌေး အိုအိုင်စီအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ် မာမွတ်ခိုမ် အမည်ရကြောင်းပါ။ သယ်… ဒီငမိုက်သားကို ငါကိုယ်တိုင် သွားစုန်းမည်… စီးတော်နွား အောင်ပုနဂါး ပြင်စေ။ ကြောင်ကြီးကား တုပ်တုပ်မလှုပ်… ။ ဆိတ်ထိန်းတော်မူပါ မှန်ဂျီးသခင်မ… မာမွတ်ခိုမ်သည် လွန်စွာဆိုးသွမ်း မိုက်ရိုင်းထွားကြိုင်း ဂျလေဘီသာသာ ဖြစ်သော်လည်း ချောမောလှပ သိမ်မွေ့ယဉ်ကျေး မြင်သူငေးရသည်၊ သူ၏သာမီး သန်ဆင်ခိုင်မ် တပင်တိုင် မင်းသမီးလေးကို ငှဲ့ညှာသင့်ကြောင်းပါ။ သယ်….. ဟင်း… မှန်ဂျီးနဂါးဗျင်မ ထိတ်ခနဲ့ ဖြစ်သွားသော်လည်း ရာဇ အိန်ဒြေ အမြန်ထိမ်းလိုက်ရသည်။ ဟယ်.. ငါဘာဖြစ်သွားပါလိမ့်။။ ဘာမှာမဟုတ် မသဘာဝ ဂျေဝင်ခြင်းပေတည်း။ ဟုတ်၏ အမှန်တော့ လွန်ခဲ့သော နှစ်၂၅၀၀ တရုတ် ကူမြူနစ်သူလျှိုဘဝ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအရေးထဲက ကြောင်ကြီးအား ကြံကြိတ်ခဲ့လေသည်။ ယခုမူ မဖုံးမဖိနိုင် ပွင့်အန်ထွက်ခါနီးလေပြီ။ အခြစ်၏ စွမ်းအား လွန်စွာကြီးမားလှပေသည်… ဒန် တန့် တန်…။
မှန်ဂျီးနဂါးသခင်မ နှင့် ကြောင်တိုင်ပင်နေဘုံ
မှန်ပေသည် ကိုကြောင်… (လေသံ ပြောင်းသွားသည်ကို သတိပြုပါလေ) ကျမအနေနဲ့ ခွင့်လွှတ်နိုင်ပေမဲ့ နဂါးပြည်ဂုဏ်သိပ်ခါအတွက် ရှိသေးတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ လူ့ပြည်တက် စုံစမ်းမှ တော်ခါကြမည်။ ယခုပင်ချက်ခြင်း မတိမ်းမစောင်း ဗိန်းဗေါင်းကြွစို့ရယ်.. နွားကြီးအောင်ပု ခရီးပြင်း နှင်စေ။ ကြောင်ကြီးလည်း မငြင်းသာပဲ သူ၏ ကိုယ်လျှံတော်မ ကင်းကောင်နဂါးနှင့် လုလုနဂါးတို့အား လူ့လောကအလယ် တင့်တယ်စေရန် နဂို သဘာဝအတိုင်းမှ ဘီကီနီ တူးပိစ် အပေါ်အောက် ဝတ်စေလျက် ဘယ်ညာနှာဖက် ခြံရံက တဦးအား ခါးဖက်၊ တဦးအား ပုခုံးဖက်ရွေ့ မှန်ဂျီးဗျင်မနောက်ပါး နဂါးပြည်တွင် တိုင်ဆီဆွဲသော အလွမ်းစက်နဂါးအား တားရွေ့ ချီလိုက်ရလေတော့သည်။ အို.. ဟင့်.. ကျွတ်စ်ကျွတ်.. ကွယ်.. အဟင့် (တိုင်စီထဲမှ အသံများဖြစ်သည်။) ထိုခွီးစဉ်အတွင်း လမ်း၌ အက်စီးဒန့် ဆယ်ခါဖြစ်ခဲ့သည်၊ တိုင်စီနဂါး အလွမ်းစက် နောက်ဘက်ကြည့်မှန် တချိန်လုံး ကြည့်နေသောကြောင့်တည်း….။ နှာဗူး…
ပဲခူးမြစ်ဝဟု ခေါ်တွင်သော နေရာသို့ ရောက်ချေပြီ။ ကြောင်ကြောင် ထွက်လေ.. ရောက်နေပြီ။ ကြောင်ကြီး တော်တော်နှင့် တိုင်စီထဲမှ မထွက်နိုင်ခြေ။ ထွက်လာတော့လည်း လေးဖက်ထောက်။ ရောက်ရှိကြောင်းပါ မှန်ဂျီးသခင်မ။ တိန်… ဘယ်လိုဖြစ်သနီး ကြောင်ကြောင်… မှန်လှပါ ကြောင်တော်မျိုး ဒူးနာနေသောကြောင့် မတ်တပ်ကောင်းစွာ မရပ်နိုင်ကြောင်းပါ။ ဂျလောက် ဂျလောက်… ဒူးခေါင်းထဲမှ အသံဖြစ်သည်။ နင့်ဟာက ဒူးနာတာမှ မဟုတ်ဘဲ၊ ဒူးချောင်နေတာပဲ… တယ်ခက်သကိုး။။။ ကြောင်ကြီး မျက်နှာ အောက်ချလျက် … ကြောင်တော်မျိုး တေတင့်ပါတီဖျား…။ ခုမှတော့ မထူးပြီ၊ အစက လူယောင်ဆောင် လေ့လာမလို့၊ ကဲပါလေ ဒါဆို ငှက်လိုအသွင်ပြောင်း ချက်ကင်ဝင်ရအောင်။ ငှက်ဖြစ်စေ… အပ်ချလောင်း။
ခေါင်းလောင်း ဆယ်ယူရေး ပရောဂျက် မာန်နေဂျာ ဝှီဂါမုမ အလာacatပါ နှုတ်မှ တဖွဖွရွတ်ရင်း အနှောက်ယှက်ကင်းကင်း အောင်မြင်စေရေး ဆုတောင်းနေမိသည်။ သူနှင့်တွဲဖက်ကား ပဲခူးမြစ်ကို ဘီအိုတီစနစ်ဖြင့် လုပ်စားနေသူ မောင်းဝတ်။ သူလည်း အားကျမခံ ဘူခါရုံလျက် သောက်ရေသန့်ဗူးထဲ ဝီစကီထည့်ကာ စီမံအုပ်ချုပ်နေသည်။ ကြွပါရှင် ကြွပါရှင်.. ပရောဂျက် လိုကယ်လ် ငွေရှင်ကြေးရှင်များ ရောက်လာပြီမို့ ပျာပျာသလဲ ကြိုဆိုရသည်။ ခိုနီဒုံနှင့် လေမားမား ဆို မသိသူမရှိ စီးပွားရေးလောကတွင် မသိသူမရှိ။ ယခုလည်း မာမွတ်ခိုမ်နှင့် အချီကြီးတချီ ပွပေါက်ကြံကြလေပြီ။ ခိုနီဒုံဂျီးမှ ဟေ့.. မောင်းဝတ်နဲ့ဝှီဂါ… အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ ပေးစရာ မလိုဘူးနော်… မကြေနပ် နဂါးနဲ့တိုက်သပ်မယ် ပြော… ကြားလား။ လေမားမားကလည်း တဖုံ… ဒီမှာ ငါးပိတပိသာ ယူလာတယ်၊ အလုပ်သမားတွေကျွေးလိုက်.. ပြီးရင် လုပ်ခတဝက်ဖြတ်.. ကွန်ပလိန်းတက်ရင် ခိုနီဒုံပြောသလို ပြောလိုက်။ မြစ်ရှုခင်းက သာယာလိုက်တာကွ… ဟောဟိုမှာ ဇင်ယော်ငှက်လေးနှစ်ကောင် ပျံနေတာ လှလိုက်တာ။ မှန်ဂျီးနှင့်ကြောင် ဇင်ယော်အတုနှစ်ကောင်မှာ ခိုနီခိုပြာနှစ်ဦး ပြောဆိုနေသံများကို ကြည့်ရင်း အခြေခံအလုပ်သမားထုကြီးအတွက် ယာဉ်ထုမနာ ဖြစ်လျက်ရှိသည်။ ကတောက်စ်…
ခိုနီဒုံ ခိုပြာမား နှင့် ခိုစိမ်းခိုင်မ်
ပြောရင်း ကြည့်ရင်း လောဘတက်လာတော့ ငှက်နှစ်ကောင်ကို လေသနတ်ပစ်ဖမ်းကြလေသည်။ ဒိန်း.. ဒိုင်းညှောင်…။ ပြေးဟ လွှားဟ.. တကယ်ဆော်သဟ… နဂါးဆိုသည်မှာ တန်ခိုးရှိသော်လည်း ရုတ်တရက်မို့ ခြေဦးတည့်ရာ ပြေးရတော့သည်။ ကြောင်ကြီး ငါ့စောင့်ပါဦး… စောင့်လို့ဖြစ်ဖူး မှန်ဂျီးသခင်မ… ထိရင် အကင်ခံရမှာ။ ဒီကပြေး.. ဟိုက မော်တော်ဖြင့်လိုက်ပစ်… နောက်ဆုံး အခြေအနေ မဟန်သည်မို့ လူအသွင်ပြောင်း ကုန်းပေါ်တက်ပြေးရသည်။ ဟောဟဲ ဟောဟဲ… အရေးကြုံတော့ သက်လုံမကောင်း.. သာခွေယိုဖြစ်ပြီ။ ကင်းကောင်နှင့် လုမဂါး မည်သို့ရှိမည်မသိ။ ဒင်းတို့အား မလှံနိုင်အောင် တီးခဲ့သည်မို့ ဖလာဘ်ပြနေမည်က သေချာသည်။ ဒီအတိုင်း ပြေးနေလို့ မဖြစ်ဘူး.. နောက်မှာ မူဆင်မ နှစ်ယောက် နွားသပ်မဲ့အတိုင်း လိုက်လာနေပြီ။ နေရာကောင်းရှာ ပုန်းကြစို့ရဲ့…။ ကံကောင်းခြင်တော့ ခြံကြီးတခြံ ရှေ့မှာ… ဂွတ်ထ ဝက်ခြံကြီးဟ။ နဂါးနှစ်ကောင် လူအသွင်မှ ဝက်များဖြစ်သွားသည်။ ဝှီဂါမနှင့် မောင်းဝတ် ဘာတတ်နိုင်မည်နည်း။ ခိုနီဒုံနှင့် လေမားမားထံမှ ဘောက်ဆူးလဲ လိုခြင်၊ အလာတားမြစ်ထားသည်မို့ ထိလည်းမထိရဲ။။။ ကြံရာမရသိအဆုံး ဆိတ်စိုးမာန်ဆိုးဖြင့် လှံပြကာ ထွက်သွားကြသည်။ မှန်ဂျီးနဂါးမှာ မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်နှင့်… ကြောင်ကြီးကတော့ ခပ်တည်တည်ပင် သူတို့လှံပြသည်ကို ဖုံးကင်မရာနှင့် မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်သည်။ ဖဘမှာ တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာ…။
ခေါင်းလောင်းကြီး ဆယ်လို့ ရမည်လော… မည်သို့မည်ပုံ ကြံကြမည်နည်း… ဘာတွေဆက်ဖြစ်မည်နည်း… အပိုင်း(၂) မျှော်….
နဂါးဆိုတာ ဘယ်​ဘုံဘဝမှာ​နေသတုန်း အ​မောင်​​ကြောင်​ကြီး
Thu Yain says:
နဂါးပြည်တွင် တိုင်ဆီဆွဲသော အလွမ်းစက်နဂါးအား တားရွေ့ ချီလိုက်ရလေတော့သည်။ အို.. ဟင့်.. ကျွတ်စ်ကျွတ်.. ကွယ်.. အဟင့် (တိုင်စီထဲမှ အသံများဖြစ်သည်။) ထိုခွီးစဉ်အတွင်း လမ်း၌ အက်စီးဒန့် ဆယ်ခါဖြစ်ခဲ့သည်၊ တိုင်စီနဂါး အလွမ်းစက် နောက်ဘက်ကြည့်မှန် တချိန်လုံး ကြည့်နေသောကြောင့်တည်း….။ နှာဗူး…
.ပေး… တက်စီးခ အဲလေ…တက်စီခ (တစ်ဆက်ရှင် ဒေါ်လှ ၁ရာနဲ့ သုံးဆက်ရှင် = သုံးရာ)
ပုံ/ ရွေ့လျားဘိ စွန့်ဦးတီထောင်သူ မှော်တော်ကား ဆားဗစ်ဗျင်ကြီး အလွမ်းစက်
ကြောင်၈ျီးကို အမြဲတမ်း အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ ကြောင်ကြီး ဂျီးဒေါ် မျှစ်ကြော် ဆိုတာကော ဘယ်ပျောက်နေလဲ။
ကြောင်ဏှာဂျီးကို အင်္ဂလန်ပို့ပြီး ဒေါက်တာ မာဝမ် ဖာရွတ် လက်ကို အပ်ရမယ်… ခွိ
ကြောင်ဘာသာတွေရော လူဘာသာတွေရော မျောက်စိ ကိုနောက်နေရောပဲ .. ငိငိ
ကြောင်ကြီးဟာ ကြောင်ချီးပေလို့ မြစ်ထဲဆင်းရသတဲ့
အလာ Cat ပါ ဆုတောင်းနေတုန်း ရောက်လာတဲ့ ကြောင်ကြီးကို အဲဒီ ည သတ်စားတဲ့ အကြောင်းလည်း ချန်မထားနဲ့ သလား